Body weight and sexual attractiveness - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှဲဆောငျမှု
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှဲဆောငျမှုဆိုလို့ ဇီဝကတဈယောကျ လိုငျးပွောငျးပွီး ဖိုမ ကိစ်စမြား ရေးတော့မလားဆိုပွီး မထငျလိုကျပါနဲ့ ။တကယျပွောခငျြတာက Attraction
ဆိုတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ တဈဖကျသားအပျေါ စှဲဆောငျနိုငျမှုကို ပွောခငျြတာပါ ။ဥပမာ ပေးပွောရရငျ တခွားသူတှအေပျေါလှမျးမိုးမှုရှိတဲ ရုပျရှငျမငျးသား ၊မငျးသမီးတှေ ၊အဆိုတျောတှေ အပွငျ ၊စာပဟေောပွောသူတှေ စသဖွငျ့ လူ လူခငျြး သူမြားတှကေ သဘောကလြောကျအောငျ စှဲဆောငျနိုငျသူတှေ ရှိပါတယျ ။
လူသားတှအေနနေဲ့ တဈဖကျသားအပျေါ စှဲဆောငျမှုရှိခငျြတာဟာ သဘာဝတရားပါပဲ ။လူတိုငျး သူမြားတှေ ကိုယျ့အပျေါ အာရုံကတြာမြိုး အနညျးနဲ့ အမြား လိုခငျြ
တတျကွတာ ရှေးပဝသေဏီကတညျးကပါ ။
ဒါဆို ဘယျလိုအခကျြတှကေ သူမြားတှကေို စှဲဆောငျနိုငျသလဲ။
ကိုယျသငျးရနံ့ စတဲ့အခကျြတှကေ အဓိက အခနျးကဏ်ဍက ပါဝငျပါတယျ ။
ရုပျရညျသှငျပွငျလို့ ဆိုပမေယျ့ တကယျတမျးက မကျြနှာပွငျအနအေထား(မကျြခုံး ၊မကျြလုံး ၊နဖူးကစလို့) ၊အသားအရေ ၊အသားအရောငျ ၊ကိုယျနဟေနျထား နဲ့
ကိုယျအလေးခြိနျ အဆုံး အားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ ။ဒီအခကျြတှထေဲကမှ အခု ဆောငျးပါး မှာဆှေးနှေးခငျြတာကတော့ ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှဲဆောငျမှုအကွောငျး လေးပါ ။
မျောဒယျလေးလို ပိနျသှယျလတြာ ပိုစှဲဆောငျမှု ရှိသလား ၊အကိတျကလေးတှကေပိုစှဲဆောငျမှု ရှိသလား…….
ပိနျတာစှဲဆောငျမှု ပိုရှိသလား ၊ပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုး အလှတိုးကလေးတှကေ ပိုစှဲဆောငျမှုရှိသလားလို့ တကယျတမျးပွောကွစတမျးဆိုရငျ တိတိကကြ အဖွမေရှိပါ။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ လူတဈကိုယျ အကွိုကျတဈမြိုးမို့ပါ ။အကွိုကျတှကေလညျး နရော ၊ ဒသေ ၊ဓလထေုံ့းတမျးအရ ကှာခွားမှု ရှိသလို အခြိနျနဲ့ အမြှလညျး ပွောငျးလဲနိုငျလို့ပါ။
ဒီမှာ အမရေိကနျက စဈတမျးတဈခုကို ပွောပါရစေ ။အမရေိကနျပွညျထောငျစုရှိ အမြိုးသမီးတှကေို အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ပိနျတာနဲ့ ဝတာ ဘယျကိုယျအလေးခြိနျက စှဲဆောငျမှုရှိမယျလို့ သူတို့စိတျထဲဘယျလိုထငျသလဲလို့ စဈတမျးကောကျတဲ့အခါ ပိနျတဲ့သူတှကေို အမြိုးသားတှေ ပိုကွိုကျတယျထငျတယျလို့ အမြားစုက ဖွကွေပါတယျ ။အမြိုးသားတှကေို စဈတမျးပွနျကောကျကွညျ့တော့ ကိုယျအလေးခြိနျ အနတေျော ပွညျ့ပွညျ့ကလေးကို ကွိုကျကွပါသတဲ့ ။ဒါ့အပွငျ ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ ပတျသကျပွီး လူသားတှရေဲ့ စှဲဆောငျမှုရှိတယျဆိုတဲ့ အမွငျပွောငျးလဲလာမှုကိုလညျး ထညျ့စဉျးစားရပါ့မယျ ။ဥပမာ-ဝတဲ့သူမြားတဲ့ ဒသေတှမှော သူတို့မကျြစိထဲမှာ ဝနတောလညျး လှနတောပါပဲ ။
ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကတော့ ပိနျတာ ၊ဝတာကို အမွငျတဈခု ၊ပေါငျခြိနျတဈခုတညျးနဲ့ မဆုံးဖွတျနိုငျပါဘူး ။ဘီအမျအိုငျ BMI လို့ချေါတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ညှနျးတမျးနဲ့ ဆုံးဖွတျပါတယျ ။
ကိုယျအလေးခြိနျညှနျးတမျး BMI ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယျအလေးခြိနျ (ကီလိုဂရမျ)ကို အရပျ (မီတာ) နှဈထပျနဲ့ စားခွငျးဖွငျ့ သငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျညှနျးတမျးကို သိနိုငျပါတယျ ။
၁၈.၅ အောကျဆိုရငျ ပိနျလှနျးပါတယျ ။သငျ့ကိုယျအလေးခြိနျတကျအောငျ ကွိုးစား သငျ့ပါတယျ ။
၁၈.၅ နဲ့ ၂၅ ကွားဆိုရငျ ကနျြးမာရေး အရ ကနျြးမာသနျစှမျး စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျပါ ။
၂၅ကြျောရငျတော့ သငျဟာ အဝလှနျနပေါပွီ ။ကနျြးမာရေးအရ စှဲဆောငျမှု မရှိပါ ။ ကိုယျအလေးခြိနျခသြငျ့နပေါပွီ ။
ဒါ့အပွငျ ခါးနဲ့ တငျပါးအခြိုး Waist Hip ratio နဲ့လညျး ကွညျ့ပါသေးတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျအရ သိပျမသိသာပမေယျ့ ဗိုကျပူ ခါးတုတျနရေငျလညျး ကနျြးမာရေးအမွငျအရ စှဲဆောငျမှုရှိတယျလို့ မဆိုနိုငျပါ ။
ခါးနဲ့ တငျပါးအခြိုး Waist Hip ratio ဆိုတာ ဘာလဲ
ခါးဆိုပမေယျ့ တိုငျးရမယျ့နရောက သငျ့ခကျြအပျေါ တဈ စငျတီမီတာကနေ တိုငျးပါ ။တငျပါးနရောမှာတော့ အကားဆုံး အဖှံ့ဆုံးနရောကနေ တိုငျးပါ ။ပွီးရငျ အခြိုးခပြါ ။
အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးတှပေါ ခါးသေး တငျစှငျ့တဲ့သူတှကေို အမြားအားဖွငျ့ သဘောကတြတျကွပါတယျ ။ဒါဆိုရငျ ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့ကနေ ကွညျ့
ခါးနဲ့ တငျပါးအခြိုး Waist Hip ratio အမြိုးသမီးတှမှော ဝ.၇ နဲ့ အမြိုးသားတှမှော ဝ.၉ ဟာ စှဲဆောငျမှု အရှိဆုံးပါ ။ကနျြးမာရေးအရလညျး ကောငျးပါ တယျ ။ထို့ထကျနညျးခွငျး ၊မြားခွငျးဟာ စှဲဆောငျမှုလညျး မရှိသလို ကနျြးမာရေးအရ လညျး မကောငျးပါ ။မြိုးပှားနိုငျအားပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိသလို ရှိသငျ့တာထကျ ပိုမြားနကေ ၊တဈနညျး ဗိုကျပူ ခါးတုတျတို့မှာ နှလုံးကနျြးမာရေးထိခိုကျနိုငျသလို သှေးခြို ဆီးခြိုပါ ဝငျရောကျလာနိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ စှဲဆောငျမှု ရှိဖို့အတှကျရော ၊ကနျြးမာဖို့ အတှကျပါ ဘယျလို ကိုယျအလေးခြိနျရှိသငျ့သလဲဆိုတာ သတိပွုဆငျခွငျနိုငျကွပါစေ…………….
ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲဆောင်မှု
လိင်ပို်င်းဆိုင်ရာ စွဲဆောင်မှုဆိုလို့ ဇီဝကတစ်ယောက် လိုင်းပြောင်းပြီး ဖိုမ ကိစ္စများ ရေးတော့မလားဆိုပြီး မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။တကယ်ပြောချင်တာက Attraction
ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဖက်သားအပေါ် စွဲဆောင်နိုင်မှုကို ပြောချင်တာပါ ။ဥပမာ ပေးပြောရရင် တခြားသူတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ ရုပ်ရှင်မင်းသား ၊မင်းသမီးတွေ ၊အဆိုတော်တွေ အပြင် ၊စာပေဟောပြောသူတွေ စသဖြင့် လူ လူချင်း သူများတွေက သဘောကျလောက်အောင် စွဲဆောင်နိုင်သူတွေ ရှိပါတယ် ။
လူသားတွေအနေနဲ့ တစ်ဖက်သားအပေါ် စွဲဆောင်မှုရှိချင်တာဟာ သဘာဝတရားပါပဲ ။လူတိုင်း သူများတွေ ကိုယ့်အပေါ် အာရုံကျတာမျိုး အနည်းနဲ့ အများ လိုချင်
တတ်ကြတာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းကပါ ။
ဒါဆို ဘယ်လိုအချက်တွေက သူများတွေကို စွဲဆောင်နိုင်သလဲ။
ကိုယ်သင်းရနံ့ စတဲ့အချက်တွေက အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါတယ် ။
ရုပ်ရည်သွင်ပြင်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းက မျက်နှာပြင်အနေအထား(မျက်ခုံး ၊မျက်လုံး ၊နဖူးကစလို့) ၊အသားအရေ ၊အသားအရောင် ၊ကိုယ်နေဟန်ထား နဲ့
ကိုယ်အလေးချိန် အဆုံး အားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ ။ဒီအချက်တွေထဲကမှ အခု ဆောင်းပါး မှာဆွေးနွေးချင်တာကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲဆောင်မှုအကြောင်း လေးပါ ။
မော်ဒယ်လေးလို ပိန်သွယ်လျတာ ပိုစွဲဆောင်မှု ရှိသလား ၊အကိတ်ကလေးတွေကပိုစွဲဆောင်မှု ရှိသလား…….
ပိန်တာစွဲဆောင်မှု ပိုရှိသလား ၊ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး အလှတိုးကလေးတွေက ပိုစွဲဆောင်မှုရှိသလားလို့ တကယ်တမ်းပြောကြစတမ်းဆိုရင် တိတိကျကျ အဖြေမရှိပါ။
ဘာလို့လဲဆိုရင် လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမို့ပါ ။အကြိုက်တွေကလည်း နေရာ ၊ ဒေသ ၊ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ကွာခြားမှု ရှိသလို အချိန်နဲ့ အမျှလည်း ပြောင်းလဲနိုင်လို့ပါ။
ဒီမှာ အမေရိကန်က စစ်တမ်းတစ်ခုကို ပြောပါရစေ ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပိန်တာနဲ့ ၀တာ ဘယ်ကိုယ်အလေးချိန်က စွဲဆောင်မှုရှိမယ်လို့ သူတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုထင်သလဲလို့ စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ ပိန်တဲ့သူတွေကို အမျိုးသားတွေ ပိုကြိုက်တယ်ထင်တယ်လို့ အများစုက ဖြေကြပါတယ် ။အမျိုးသားတွေကို စစ်တမ်းပြန်ကောက်ကြည့်တော့ ကိုယ်အလေးချိန် အနေတော် ပြည့်ပြည့်ကလေးကို ကြိုက်ကြပါသတဲ့ ။ဒါ့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသားတွေရဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ပြောင်းလဲလာမှုကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါ့မယ် ။ဥပမာ-၀တဲ့သူများတဲ့ ဒေသတွေမှာ သူတို့မျက်စိထဲမှာ ၀နေတာလည်း လှနေတာပါပဲ ။
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကတော့ ပိန်တာ ၊၀တာကို အမြင်တစ်ခု ၊ပေါင်ချိန်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး ။ဘီအမ်အိုင် BMI လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ညွှန်းတမ်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ။
ကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းတမ်း BMI ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)ကို အရပ် (မီတာ) နှစ်ထပ်နဲ့ စားခြင်းဖြင့် သင့် ကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းတမ်းကို သိနိုင်ပါတယ် ။
၁၈.၅ အောက်ဆိုရင် ပိန်လွန်းပါတယ် ။သင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင် ကြိုးစား သင့်ပါတယ် ။
၁၈.၅ နဲ့ ၂၅ ကြားဆိုရင် ကျန်းမာရေး အရ ကျန်းမာသန်စွမ်း စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ပါ ။
၂၅ကျော်ရင်တော့ သင်ဟာ အ၀လွန်နေပါပြီ ။ကျန်းမာရေးအရ စွဲဆောင်မှု မရှိပါ ။ ကိုယ်အလေးချိန်ချသင့်နေပါပြီ ။
ဒါ့အပြင် ခါးနဲ့ တင်ပါးအချိုး Waist Hip ratio နဲ့လည်း ကြည့်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်အရ သိပ်မသိသာပေမယ့် ဗိုက်ပူ ခါးတုတ်နေရင်လည်း ကျန်းမာရေးအမြင်အရ စွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါ ။
ခါးနဲ့ တင်ပါးအချိုး Waist Hip ratio ဆိုတာ ဘာလဲ
ခါးဆိုပေမယ့် တိုင်းရမယ့်နေရာက သင့်ချက်အပေါ် တစ် စင်တီမီတာကနေ တိုင်းပါ ။တင်ပါးနေရာမှာတော့ အကားဆုံး အဖွံ့ဆုံးနေရာကနေ တိုင်းပါ ။ပြီးရင် အချိုးချပါ ။
အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးတွေပါ ခါးသေး တင်စွင့်တဲ့သူတွေကို အများအားဖြင့် သဘောကျတတ်ကြပါတယ် ။ဒါဆိုရင် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်
ခါးနဲ့ တင်ပါးအချိုး Waist Hip ratio အမျိုးသမီးတွေမှာ ၀.၇ နဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ၀.၉ ဟာ စွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးပါ ။ကျန်းမာရေးအရလည်း ကောင်းပါ တယ် ။ထို့ထက်နည်းခြင်း ၊များခြင်းဟာ စွဲဆောင်မှုလည်း မရှိသလို ကျန်းမာရေးအရ လည်း မကောင်းပါ ။မျိုးပွားနိုင်အားပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသလို ရှိသင့်တာထက် ပိုများနေက ၊တစ်နည်း ဗိုက်ပူ ခါးတုတ်တို့မှာ နှလုံးကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သလို သွေးချို ဆီးချိုပါ ၀င်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် စွဲဆောင်မှု ရှိဖို့အတွက်ရော ၊ကျန်းမာဖို့ အတွက်ပါ ဘယ်လို ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသင့်သလဲဆိုတာ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ…………….